ဩဇာတိက္ကမ ရှိစေဖို့ အချက် ၇ ချက် – Gentleman Magazine
သင်တွေ့ဖူးတဲ့သူတိုင်းကို သင့်အပေါ် လေးစားကြည်ညိုလာအောင်လုပ်နိုင်ရင် လောကဓံဆိုတာ သင့်အတွက် လက်ခုပ်ထဲကရေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သတင်းကောင်းက အဲဒိ အရည်အချင်း ၇ ချက် သင်ယူလို့ရပါတယ်။ အဲဒိအရည်အချင်းကို ဩဇာတိက္ကမ လို့ လူသိများပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဩဇာ တိုးတက်စေဖို့ လုပ်စရာ သင်ယူစရာတွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ဘယ်နေရာသွားသွား လူချစ်လူခင်များပါစေ။ လူတွေကို သူတို့ ချစ်တဲ့အရာတွေအကြောင်းမေးပါ။ သူတို့ပြန်ဖြေရင် အဲဒိအကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင် ပြန်မေးပါ။ လူတွေက သူတို့ ချစ်တဲ့ နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေအကြောင်းကို ပြောရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ သူတို့ပျော်နေတာကို ကြည့်ရင်း သင်ပါ ပျော်လာပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တော့ ရှိစမြဲပါ။ လူတစ်ရာလောက်ရှိတဲ့ ပါတီတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လူတိုင်းမှာ သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေနဲ့အတူ ဗဟုသုတတွေ အတွေးအခေါ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အသက် သုံးလေးဆယ် လူအယောက်တစ်ရာနဲ့ စကားပြောနိုင်ရင် သင် အနှစ်သုံးလေးထောင်စာ ဗဟုသုတတွေ အတွေးအခေါ်တွေ ရသွားမှာပါ။ ပါတီမသိမ်းခင် လူတိုင်းနဲ့စကားပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ကဲ စကားပြောတာကဟုတ်ပါပြီ။ သူတို့ လေးစားလာအောင်၊ လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ပြောလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
၁. ဂရုတစိုက် နားထောင်ပါ
ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဘယ်သူနဲ့ စကားပြောပြော စကားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားပါစေ။ နှစ်ယောက်ခြင်း ပြောတာဆိုရင် အခန်းထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့သူ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိသလိုကို သဘောထားပြီးပြောပါ။ အုပ်စုနဲ့ ပြောနေတာဆိုရင်တော့ လက်ရှိပြောနေတဲ့သူကို အာရုံစိုက်ပေးပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတာဆိုရင်တော့ တစ်အုပ်စုလုံးကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။ လူတစ်ယောက်ခြင်းစီကို ကြည့်ပြီးပြောပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့ အုပ်စုထဲမှာ စကားပြောစွမ်းရည်ကို တိုးစေပါတယ်။ အုပ်စုထဲက လူတော်တော်များများ သင့်ကို လေးစားသွားစေပါတယ်။
၂. စမတ်ကျကျ၊ ပါးပါးနပ်နပ် နေပါ
သင်ဟာ ဩဇာပြည့်ဝသူတစ်ဦးဖြစ်ရင် ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းပြီး အောင်မြင်ပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုကတော့ လျော့နည်းနေမှာပါ။ ဆွဲဆောင်မှုအားဆိုတာ ဟိုလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကို လူတွေ မှတ်မိနေတာ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ကြည့်ကောင်းအောင် ပြုံးတတ်တာတွေကို ပြောတာပါ။ ဩဇာဆိုတာ ဒါပါပဲ။ အဲဒါ မွေးရာပါ မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ယူရတာပါ။ လူထု ခေါင်းဆောင်တွေ ဩဇာရှိတယ်ဆိုတာ။ သူတို့က အားလုံးရှေ့မှာ မတ်မတ်ရပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်စိတ် အပြည့်ရှိတယ်၊ သူများတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးရတာ နှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့်ပါ။
၃.သတိရပြီး ပြန်ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို မှတ်မိတာ၊ အစည်းအဝေးမှာ ဥပမာပေးတာ တွေဟာ သူတို့ကို အထူးတလည် ချီးမွမ်းစကားမပါပဲ ချီးကျူးလိုက်ခြင်းပါပဲ။ သူတို့နာမည်ကို မှတ်မိတဲ့အတွက် သင့်ကို လေးစားလာပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ယောက်တွေ့ကြရင် သူများမိတ်ဆက်တာ ထိုင်စောင့်နေမယ့်အစား ကိုယ်က အရင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ မိတ်ဆက်ပြီးလို့ နာမည်ဖလှယ်ကြရင် “ငါ သူ့နာမည်ကို မှတ်မိရမယ်” လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြောပါ။ အဲဒိလို ကိုယ့်ဘာသာအမိန့်ပေးခြင်းက သူတို့နာမည်ပြောရင် အာရုံစိုက်မိစေပါတယ်။ နောက်ကျရင် မှတ်မိနေဖို့ မှတ်ဉာဏ်ကိုလဲ အထောင်အကူပြုပါတယ်။ နာမည်ကို ကြားလိုက်တာနဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ထပ်ထပ်ပြီး ပြောနေပါ။ စကားထဲမှာ နာမည်ခေါ်ပြီးပြောပါ။ အဲဒိနည်းက အမြဲတမ်း အောင်မြင်ပါတယ်။
၄. ကိုယ်နေဟန်ထား ကျင့်ပါ
ဩဇာတိုးတက်စေဖို့ နောက်တစ်နည်းကတော့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ဂရုစိုက်တာပါပဲ။ အဲဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက် တိုးတက်စေပါတယ်။
ကိုယ်ဟန်အမူအရာဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ မသိစိတ်က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ မျက်နှာထားကို တိတ်တိတ်လေးစောင့်ကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးနေပါတယ်။ ခေါင်းကိုမော့၊ ရင်ကိုကော့၊ ခြေကို ခွဲ၊ တင်ပါးပေါ်လက်တင်ပြီး တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်လောက်နေလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ချက်တွေ သိသိသာသာတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဩဇာရောပေါ့။
၅. မျက်လုံးတွေက စကားပြောပါတယ်
မျက်လုံးချင်းဆိုင် ကြာကြာကြည့်နိုင်ရင် လူတွေကပိုပြီး ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ မကြောက်ပါနဲ့။ အဲဒါလန့်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်လုံးချင်း ကြာကြာမကြည့်နိုင်ရင် မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားကို ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
စကားပြောရင် အပြုသဘောပဲ ဆောင်ပါစေ။ တစ်ဘက်လူက အဆိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်နေရင်တောင် အကောင်းမြင်စိတ်လေး နည်းနည်းကူးသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်အကြောင်း သူများပြန်စဉ်းစားတိုင်း အပြုသဘောတွေကိုပဲ ပြန်ခံစားမိပါစေ။ စကားလမ်းကြောင်းကို ကောင်းတဲ့ဘက်ကို လွှဲပစ်ပါ။ တခြားသူတွေက သင့်ကို အားကိုးလာပါလိမ့်မယ်။
လူတွေကို ချီးကျူးတတ်ပါ။ လေ့ကျင့်ဖို့ လိုနိုင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက ကောင်းတဲ့အချက် အသေးစိတ်လေးတွေကို သတိမထားမိပဲ ချီးကျူးဖို့ အခွင့်အရေးလေးတွေကို ကျော်သွားမိတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချီးကျူးလိုက်ရင် သူ့အတွက် သင်က အားလုံးထဲကနေ ထိုးထွက်နေတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ချီးကျူးစကားပြောရင် ခြေဟန်လက်ဟန် မျက်နှာအမူအယာ အကုန်ပါပါစေ။ အဲဒါက လူတိုင်းကို သင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ မှတ်မိစေပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်က အချက်တွေ အားလုံးကို လေ့ကျင့်ခဲ့ရင် တခြားသူတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဩဇာရှိတဲ့သူတွေဟာ တန်ခိုးရှိတာပါပဲ။
ဩဇာတိက်ကမ ရှိစဖေို့ အခကျြ ရ ခကျြ
သငျတှဖေူ့းတဲ့သူတိုငျးကို သငျ့အပျေါ လေးစားကွညျညိုလာအောငျလုပျနိုငျရငျ လောကဓံဆိုတာ သငျ့အတှကျ လကျခုပျထဲကရေ ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ သတငျးကောငျးက အဲဒိ အရညျအခငျြး ရ ခကျြ သငျယူလို့ရပါတယျ။ အဲဒိအရညျအခငျြးကို ဩဇာတိက်ကမ လို့ လူသိမြားပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ဩဇာ တိုးတကျစဖေို့ လုပျစရာ သငျယူစရာတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။
ဘယျနရောသှားသှား လူခဈြလူခငျမြားပါစေ။ လူတှကေို သူတို့ ခဈြတဲ့အရာတှအေကွောငျးမေးပါ။ သူတို့ပွနျဖွရေငျ အဲဒိအကွောငျးကို စိတျဝငျတစား နားထောငျ ပွနျမေးပါ။ လူတှကေ သူတို့ ခဈြတဲ့ နှဈသကျတဲ့ အရာတှအေကွောငျးကို ပွောရတာ အရမျးပြျောပါတယျ။ သူတို့ပြျောနတောကို ကွညျ့ရငျး သငျပါ ပြျောလာပါလိမျ့မယျ။
လူတိုငျးမှာ ပုံပွငျတဈပုဒျတော့ ရှိစမွဲပါ။ လူတဈရာလောကျရှိတဲ့ ပါတီတဈခုကို စဉျးစားကွညျ့ပါ။ လူတိုငျးမှာ သူတို့ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ နှဈတှနေဲ့အတူ ဗဟုသုတတှေ အတှေးအချေါတှေ ရှိနပေါတယျ။ အသကျ သုံးလေးဆယျ လူအယောကျတဈရာနဲ့ စကားပွောနိုငျရငျ သငျ အနှဈသုံးလေးထောငျစာ ဗဟုသုတတှေ အတှေးအချေါတှေ ရသှားမှာပါ။ ပါတီမသိမျးခငျ လူတိုငျးနဲ့စကားပွောနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
ကဲ စကားပွောတာကဟုတျပါပွီ။ သူတို့ လေးစားလာအောငျ၊ လိုလိုခငျြခငျြနဲ့ ပွောလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ။
၁. ဂရုတစိုကျ နားထောငျပါ
ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကွီးဆုံးပါ။ ဘယျသူနဲ့ စကားပွောပွော စကားထဲမှာ စိတျဝငျစားပါစေ။ နှဈယောကျခွငျး ပွောတာဆိုရငျ အခနျးထဲမှာ ကိုယျနဲ့ စကားပွောနတေဲ့သူ နှဈယောကျပဲ ရှိသလိုကို သဘောထားပွီးပွောပါ။ အုပျစုနဲ့ ပွောနတောဆိုရငျတော့ လကျရှိပွောနတေဲ့သူကို အာရုံစိုကျပေးပါ။ သငျကိုယျတိုငျပွောနတောဆိုရငျတော့ တဈအုပျစုလုံးကို ဂရုစိုကျပေးပါ။ လူတဈယောကျခွငျးစီကို ကွညျ့ပွီးပွောပါ။ ဒါက သငျ့ရဲ့ အုပျစုထဲမှာ စကားပွောစှမျးရညျကို တိုးစပေါတယျ။ အုပျစုထဲက လူတျောတျောမြားမြား သငျ့ကို လေးစားသှားစပေါတယျ။
၂. စမတျကကြ၊ ပါးပါးနပျနပျ နပေါ
သငျဟာ ဩဇာပွညျ့ဝသူတဈဦးဖွဈရငျ ဆှဲဆောငျမှုအားကောငျးပွီး အောငျမွငျပမေယျ့ စိတျဖိစီးမှုကတော့ လြော့နညျးနမှောပါ။ ဆှဲဆောငျမှုအားဆိုတာ ဟိုလိုပွောတာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ကို လူတှေ မှတျမိနတော၊ ကိုယျ့ဘာသာ ကွညျ့ကောငျးအောငျ ပွုံးတတျတာတှကေို ပွောတာပါ။ ဩဇာဆိုတာ ဒါပါပဲ။ အဲဒါ မှေးရာပါ မဟုတျပါဘူး။ လကေ့ငျြ့ယူရတာပါ။ လူထု ခေါငျးဆောငျတှေ ဩဇာရှိတယျဆိုတာ။ သူတို့က အားလုံးရှမှေ့ာ မတျမတျရပျနိုငျတယျ၊ သူတို့ကိုယျသူတို့ ယုံကွညျစိတျ အပွညျ့ရှိတယျ၊ သူမြားတှအေပျေါမှာ လှမျးမိုးရတာ နှဈသကျတဲ့စိတျရှိတယျ။ အဲဒါတှကွေောငျ့ပါ။
၃.သတိရပွီး ပွနျပွောနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ
လူတဈယောကျရဲ့ နာမညျကို မှတျမိတာ၊ အစညျးအဝေးမှာ ဥပမာပေးတာ တှဟော သူတို့ကို အထူးတလညျ ခြီးမှမျးစကားမပါပဲ ခြီးကြူးလိုကျခွငျးပါပဲ။ သူတို့နာမညျကို မှတျမိတဲ့အတှကျ သငျ့ကို လေးစားလာပါလိမျ့မယျ။
နှဈယောကျတှကွေ့ရငျ သူမြားမိတျဆကျတာ ထိုငျစောငျ့နမေယျ့အစား ကိုယျက အရငျ မိတျဆကျလိုကျပါ။ မိတျဆကျပွီးလို့ နာမညျဖလှယျကွရငျ “ငါ သူ့နာမညျကို မှတျမိရမယျ” လို့ ကိုယျ့ဘာသာ ပွောပါ။ အဲဒိလို ကိုယျ့ဘာသာအမိနျ့ပေးခွငျးက သူတို့နာမညျပွောရငျ အာရုံစိုကျမိစပေါတယျ။ နောကျကရြငျ မှတျမိနဖေို့ မှတျဉာဏျကိုလဲ အထောငျအကူပွုပါတယျ။ နာမညျကို ကွားလိုကျတာနဲ့ ခေါငျးထဲမှာ ထပျထပျပွီး ပွောနပေါ။ စကားထဲမှာ နာမညျချေါပွီးပွောပါ။ အဲဒိနညျးက အမွဲတမျး အောငျမွငျပါတယျ။
၄. ကိုယျနဟေနျထား ကငျြ့ပါ
ဩဇာတိုးတကျစဖေို့ နောကျတဈနညျးကတော့ သငျ့ရဲ့ ကိုယျနဟေနျထားကို ဂရုစိုကျတာပါပဲ။ အဲဒါဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျခကျြ တိုးတကျစပေါတယျ။
ကိုယျဟနျအမူအရာဆိုတာ ဘယျနိုငျငံသားမဆို နားလညျနိုငျပါတယျ။ လူတှရေဲ့ မသိစိတျက သငျ့ရဲ့ ကိုယျဟနျနဲ့ မကျြနှာထားကို တိတျတိတျလေးစောငျ့ကွညျ့ပွီးအမှတျပေးနပေါတယျ။ ခေါငျးကိုမော့၊ ရငျကိုကော့၊ ခွကေို ခှဲ၊ တငျပါးပျေါလကျတငျပွီး တဈမိနဈ နှဈမိနဈလောကျနလေိုကျပါ။ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျခကျြတှေ သိသိသာသာတကျလာပါလိမျ့မယျ။ ဩဇာရောပေါ့။
၅. မကျြလုံးတှကေ စကားပွောပါတယျ
မကျြလုံးခငျြးဆိုငျ ကွာကွာကွညျ့နိုငျရငျ လူတှကေပိုပွီး ယုံကွညျတတျကွပါတယျ။ မကွောကျပါနဲ့။ အဲဒါလနျ့စရာမဟုတျပါဘူး။ မကျြလုံးခငျြး ကွာကွာမကွညျ့နိုငျရငျ မကျြလုံးနှဈလုံးကွားကို ကွညျ့ပါ။ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။
စကားပွောရငျ အပွုသဘောပဲ ဆောငျပါစေ။ တဈဘကျလူက အဆိုးမွငျဝါဒီဖွဈနရေငျတောငျ အကောငျးမွငျစိတျလေး နညျးနညျးကူးသှားနိုငျပါတယျ။ သငျ့အကွောငျး သူမြားပွနျစဉျးစားတိုငျး အပွုသဘောတှကေိုပဲ ပွနျခံစားမိပါစေ။ စကားလမျးကွောငျးကို ကောငျးတဲ့ဘကျကို လှဲပဈပါ။ တခွားသူတှကေ သငျ့ကို အားကိုးလာပါလိမျ့မယျ။
လူတှကေို ခြီးကြူးတတျပါ။ လကေ့ငျြ့ဖို့ လိုနိုငျပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက ကောငျးတဲ့အခကျြ အသေးစိတျလေးတှကေို သတိမထားမိပဲ ခြီးကြူးဖို့ အခှငျ့အရေးလေးတှကေို ကြျောသှားမိတတျပါတယျ။ တဈယောကျယောကျကို ခြီးကြူးလိုကျရငျ သူ့အတှကျ သငျက အားလုံးထဲကနေ ထိုးထှကျနတေဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈသှားပါပွီ။
ခြီးကြူးစကားပွောရငျ ခွဟေနျလကျဟနျ မကျြနှာအမူအယာ အကုနျပါပါစေ။ အဲဒါက လူတိုငျးကို သငျပွောခဲ့တဲ့စကားတှေ မှတျမိစပေါလိမျ့မယျ။
အပျေါက အခကျြတှေ အားလုံးကို လကေ့ငျြ့ခဲ့ရငျ တခွားသူတှကေို လှမျးမိုးနိုငျပွီး ဦးဆောငျနိုငျသူ တဈယောကျ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဩဇာရှိတဲ့သူတှဟော တနျခိုးရှိတာပါပဲ။
Previous: အလုပ်ကြွေးများကို အမြန် ရှင်းထုတ်ရန် နည်းလမ်းများ
Next: သင် အလုပ်ကို ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲ လုပ်နေလား